WhatsApp မှ mp3 ဖိုင်များပို့နည်း Androidsis
အသစ်သော Android အသုံးပြုသူများအတွက်သီးသန့်ရည်ရွယ်ထားသောဤလက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာအသစ်နှင့်သင်တို့၏များစွာသောတောင်းဆိုမှုများအရမည်မျှရိုးရှင်းသည်ကိုကျွန်ုပ်ပြသပါမည်။ WhatsApp ကနေ mp3 ဖိုင်တွေပို့.
ပထမဆုံးဒီ option ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ WhatsApp application ထဲမှာထည့်ပြီးမကြာခင်မှာပဲသူကဖယ်ရှားပစ်လိုက်တယ်ဆိုလျှင်ဘာအကြောင်းပြချက်မှလူသိများသည်မဟုတ်လျှင်ယခုငါ WhatsApp developer များကဒီ option ကိုထပ်ထည့်ပြီးပြီဆိုတာငါသဘောပေါက်ပြီ။ WhatsApp မှ mp3 files များကိုမည်သည့် application update မှမည်သည့် mpXNUMX ဖိုင်ပို့နိုင်သည်ကိုအတိအကျကျွန်ုပ်ကောင်းစွာမသိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုင်များကို WhatsApp သူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေပါ ဒါဟာတဖန်တန်ဖိုးထားခံရဖို့သံသယသောနောက်တဖန်ယခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဤဆောင်းပါး၏ခေါင်းစီးသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းသောသင်ခန်းစာပါသည့်ဗီဒီယိုတွင်အမြင်အာရုံဖြင့်ကျွန်ုပ်ရှင်းပြသည် WhatsApp မှ mp3 ဖိုင်များပေးပို့ရန်မည်မျှလွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းပါသည်ကျွန်ုပ်သည်ဖန်သားပြင်အနည်းငယ်နှင့်အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပေးမည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
မသန်စွမ်း WhatsApp ကနေ mp3 ဖိုင်တွေပို့ယုတ္တိနှင့်ယူဆရသည်မှာကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး ဆုံးပြုလုပ်ရမည့်အရာမှာ WhatsApp application ၏သူ့ဟာသူ၊ နောက်ဆုံးပေါ်ရရှိနိုင်သည့် version သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရမည့် application တစ်ခုဖြစ်သည်။
လျှောက်လွှာဖွင့်ပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့ tab ကိုသွားပါ ချတ် o ဆက်သွယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ mp3 ဖိုင်ပို့လိုသောအဆက်အသွယ်ကိုရွေးချယ်ပါ။
ငါတို့ mp3 file ကိုပို့ချင်သောအဆက်အသွယ်၏ chat ထဲမှာတစ်ချိန်က, ကျနော်တို့ကလစ်၏ပုံစံအတွက်အိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါလိမ့်မယ် လျှောက်လွှာ၏အထက်ပိုင်းတွင်၊ ဖုန်းခလုတ်ဘေးတွင်တွေ့ရပြီးရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပါ audio:
ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတိဂီတဖွင့်စက်သည်ကျွန်ုပ်တို့မျှဝေချင်သော mp3 ဖိုင်ကိုကြိုတင်ကြည့်ရှုရန်ရွေးချယ်ခွင့်နှင့်အတူဖွင့်လိမ့်မည်။ ဒုတိယရွေးစရာဖြင့်ဂူဂဲလ်ပလေးဂီတအကောင့်ကိုဖွင့်ပြီးတတိယ option ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်အသံမှတ်စုပို့နိုင်သည်။
ဒါကြောင့်ငါတို့ရွေးလိမ့်မည်, သင်တန်း, ဖြစ်လိမ့်မည် အသံနာမနှင့်အတူပေါ်လာသောပထမ ဦး ဆုံး.
ဤအရာပြီးသည်နှင့် mp3 ဖိုင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ပို့ချင်သောသူငယ်ချင်း၏ chat စကားပြောတွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ mp3 file ကိုမှန်ကန်စွာပို့ပေးနေပါတယ်.
ရွေးချယ်ထားသည့်အဆက်အသွယ်သည်၎င်းကိုလက်ခံရရှိပါကသင်သည်လျှောက်လွှာမှနားထောင်ရန်ရွေးချယ်စရာသို့မဟုတ်သင်၏အကြိုက်ဆုံးဂီတဖွင့်စက်မှနားထောင်နိုင်သည်။ သတိရပါ လက်ခံရရှိသည့်ဖိုင်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal ၏အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်၏ WhatsApp ဖိုင်တွဲထဲသို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်လိမ့်မည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Whatsapp » WhatsApp မှ mp3 ဖိုင်များပေးပို့နည်း
Rex Nolan ဟုသူကပြောသည်
ဒါပေမယ့်ဘာမရဘူးလဲ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Telegram ကိုပိုနှစ်သက်ပါတယ်၊ တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပေမယ့်သေချာတာပေါ့
Rex Nolan အားပြန်ပြောပါ
Telegram ကိုလည်းရွေးချယ်တယ်။ ကံမကောင်းတာကတော့ငါဘာလုပ်သလဲဆိုရင်ငါဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်၊ ဟုတ်၊
နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကိုကျွန်ုပ် download လုပ်ပြီးပါပြီ။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ပြီးပါပြီ။ drop-down menu တွင်အသံဖမ်းစက်နှင့် WhatsApp ဖြင့်သာမှတ်တမ်းတင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ?????
ရေဘီလာနာ (@Natalilunitaoz) ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာနောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းလည်းရှိတယ်၊ ငါအဲဒါကို install လုပ်ထားတယ်၊ အဲဒီ option က drop-down menu ထဲမှာမတွေ့ရဘူး၊ အသံဖမ်းစက်နဲ့ WhatsApp နဲ့သာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်၊ ဘာအကြောင်းပြချက်လဲ။
Rebe Luna (@Natalilunitaoz) ကိုဆက်သွယ်ပါ။
Adrian rios ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ ၎င်းကိုပိတ်ထားပါက၎င်းတို့သည် google ဂီတကိုဖွင့်ရမည်
Adrian Rios သို့ပြန်ပြောပါ
အဆုံးမှအဆုံးသို့အသစ်အပြောင်းအလဲအသစ်ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်ဆဲလ်ဖုန်း၏အသံဖမ်းစက်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောအသံဖိုင်များကိုပူးတွဲခွင့်ပြုတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ကောင်းပြီ၊ အကယ်၍ သင်သည်ရပ်တန့်သော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်သင်ကြားလိုက်သောအရာသည်တိရိစ္ဆာန်ဟောက်ခြင်းကဲ့သို့သောအသံမျှသာမဟုတ်ပါ။ ငါအဲဒါကို encryption လုပ်တာလို့ထင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအရင်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုမွမ်းမံပြီးပြီဆိုရင်ငါ့ကိုခွင့်မပြုဘူး။
အသံတွေကို WhatsApp ကပေးပို့ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ၂၄ မိနစ်ကြာတယ်။ 24 MB ထက်ပိုကြီးတဲ့ဖိုင်တွေကိုပို့လို့မရတဲ့ပိုစတာကိုငါရတယ်။ WhatsApp တွင်ကြီးမားသောဖိုင်များကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ပို့မည်နည်း။
မာရီယာ Antonieta Claverie ဟုသူကပြောသည်
Maria Antonieta Claverie အားပြန်ကြားပါ
ကောင်းပါပြီ။ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်သည်အသံဖိုင်များကိုအမြဲတမ်းပူးတွဲပေးပို့နိုင်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်၌ပြproblemနာရှိနေပါသည်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကို“ mp3 file” (သာမန်အားဖြင့်ပေးပို့တဲ့သူတွေလိုမဟုတ်တဲ့) လိုပေါ်လာတဲ့အော်ဒီယိုတချို့ကိုပို့ပေးတယ်။ ကျွန်တော့် android ကကျွန်တော့်ကို default player (WhatsApp ထဲမှာမဟုတ်) နဲ့နားထောင်ခွင့်ပေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့က internal memory ထဲမှာဒေါင်းလုပ်မရသေးဘူး။ ၎င်းတို့ကို pc မှလွှဲပြောင်း။ သိမ်းဆည်းခြင်း (သို့) တစ်ခုခုကို WhatsApp ဖိုင်တွဲတွင်ရှာမတွေ့ပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်မှဖြစ်ပျက်ခဲ့သလား။